I-AMP WordPress Plugin - i-AMP elula - i-ZU
Faka i-plugin ye-WordPress AMP - (ngokuzenzakalela)
Faka i-WordPress AMP:
Ngena ngemvume kusayithi lakho le-WordPress.
Shintshela ku- "Ama-plugins" -> "Faka" kumenyu
Yenza kusebenze i-WordPress AMP:
Shintshela ku- "Ama-plugins" -> "Ama-plugins afakiwe" kumenyu
Chofoza isixhumanisi "Yenza kusebenze" .
Faka i-plugin ye-WordPress AMP - (ngesandla)
I-plug-in ye-WP AMP "i-AMP elula" - landa:
Landa inguqulo ye-plug-in yamanje njengefayela le-ZIP ngesixhumanisi sokulanda esilandelayo:
"i-AMP elula - inguqulo yamanje"
Ngemuva kokulanda i-AMP plug-in, vula ifayili le-ZIP
Gcina "ifolda" evuliwe ku-directory ye-WordPress ngaphansi kwe:
... / wp-okuqukethwe / ama-plugins /
... / wp-okuqukethwe / ama-plugins / wp-amp-it-up / ...
Ngemuva kokufakwa ngempumelelo kwe-AMP nokusebenza ku-WordPress, ungabuka kuqala amakhasi akho we-AMP.
Sicela wazi ukuthi ukubiza ikhasi le-AMP okokuqala kungathatha isikhathi eside kunokujwayelekile! - Uma ulayisha okokuqala noma lapho ubuyekeza, i-plugin iguqula ikhodi ye-HTML ibe yikhodi ye-AMPHTML, eqale ithathe isikhathi esiningi noma esincane ngokuya ngenani lokuqukethwe. - Isikhathi sokulayisha esisheshayo , esisheshayo asibangelwa ikakhulu yikhasi lokubuka kuqala le-AMP, kepha kunalokho ukuboniswa kamuva kwekhasi le-Google AMP kusuka kunqolobane ye-AMP yenjini yokusesha, isb. Ukubuka kuqala ikhasi akufani nakamuva ngqo kusuka enjini yokusesha!
Ukuze uthole ukubuka kuqala kwekhasi lakho le-AMP , engeza ipharamitha "amp = 1" kubha yekheli lesiphequluli ekugcineni kwe-URL yendatshana / okuthunyelwe.
? amp = 1 - Uma kungekho ntambo yombuzo esetshenzisiwe:
& amp = 1 - uma kusetshenziswa intambo yombuzo:
Kungani i-plugin ye-WordPress AMP?
AMP Seite erstellen Ukuvikelwa kwedatha nokusetshenziswa kwamakhukhi umbhalo